Pixel 4, Pixel Buds ary Pixelbook Go no zava-baovao natolotr'i Google | Vaovao momba ny gadget
Pixel 4, Pixel Buds ary Pixelbook Go no zava-baovao natolotr'i Google
Ignatius Room | | Finday, portable
Taorinan'ny fivoahana am-bolana maro, tsaho sy ny hafa, ireo tovolahy avy any Mountain View dia nanolotra tamim-pomba ofisialy ny karazana smartphone vaovao ho an'ny taona 2019, sokajy iray ahitana ny Pixel 4 sy Pixel 4 XL izay efa nahafantarantsika ny pitsony rehetra.
Saingy, toa an'i Samsung, Google dia nampifantoka ny famelabelarana tamin'ny fampisehoana izay tsy vitan'ny Pixel 4 fa afaka, fa koa ireo karazana finday tsy misy tariby izay natao batemy Pixel Buds ary ilay Pixelbook Go nohavaozina, izay tadiaviny hijoro amin'ny Microsoft sy ny Apple ao anatin'ny solosaina finday rehetra.
1.1 Google Pixel 4 famaritana
1.2 Ny vidiny sy ny fisian'ny Google Pixel 4 sy Pixel 4 XL
4 Google Akanim Mini
Ny zava-baovao atolotry ny taranaka fahefatra ny laharana Pixel dia hita ao a rafitra fihetsika hitantanana ny finday avo lenta nefa tsy mila mifanerasera aminy. Araka ny hita tao amin'ny famelabelarana, ny fandidiana dia mitovy amin'ny zavatra hitantsika teo aloha tamin'ny LG na tato ho ato ao amin'ny maodelim-bohitra Huawei sy Xiaomi sasany.
Ny radar Soli, satria nanao batemy an'ity haitao ity i Google mampiditra rafitra fanekena endrika izay ahafahantsika mamoha ilay fitaovana amin'ny alàlan'ny tarehy ary miaraka amina fiasa tena mitovy amin'ilay atolotry ny Apple amin'ny iPhones miaraka amin'ny teknolojia Face ID.
Ny maha Google anao, ny tsiambaratelo hatrany no resahina. Mba hanomezana toky ireo mpampiasa matoky ity maodely vaovao ity dia milaza izany ny mpikaroka ny fampahalalana rehetra voatahiry amin'ity sensor ity dia mijanona ao amin'ilay fitaovana Ary tsy hiala amin'izany mihitsy izy, manaraka ny politikan'ny Apple mitovy amin'ny teknolojia Face ID.
Teknolojia fihetsika amin'ny smartphone Tsy dia misy dikany firy aho satria mora ny mifanerasera aminy na dia amin'ny rantsantanana tokana aza ny mandingana hira iray, mampihena ny feony, manova fampiharana. Na izany aza, eo amin'ny efijery lehibe kokoa, toy ny takelaka (izay tsy tiantsika na afaka afindra) ny fifandraisana amin'ny fihetsika dia misy dikany bebe kokoa.
Ny zava-baovao iray hafa izay miaraka amin'ity taranaka vaovao Pixel range ity dia fiasan'ny rindranasan-tsoratra, fiasa izay hiandraikitra ny fandikana ny resaka amin'ny lahatsoratra, endri-javatra tsara ho an'ny mpanao gazety sy ny mpianatra.
Hita tao amin'ny efijery ny zava-baovao farany nalaza tamin'ny laharana Pixel 4, fampisehoana 90 Hz izay manitsy ny matetika miankina amin'ny karazana atiny aseho, mba hampihenana ny fanjifana bateria izay heverin'ity asa ity amin'ny fiasana tsy tapaka rehefa tsy tena ilaina.
Google Pixel 4 famaritana
Toy ny fanao hatramin'ny nanombohan'ny maodely voalohany, Google dia mifidy habe roa: Pixel 4 miaraka amin'ny efijery 5,7-inch ary ny Pixel 4 XL misy efijery 6,3-inch. Ity taranaka vaovaon'ny Pixel ity dia tantanin'ny processeur Snapdragon 855 voalohany an'ny Qualcomm, izany hoe ilay maodelin'ny mpanera izay efa nisy hatramin'ny fiandohan'ny taona fa tsy ny fanitsiana ity mpikirakira ity izay natomboka roa volana lasa izay.
Raha ny momba ny RAM dia hitantsika ao anatiny 6 GB fahatsiarovana, somary zara raha ampitahaintsika amin'ny ankamaroan'ny terminal Android avo lenta eny an-tsena, saingy azo takarina ho ampy izany raha toa ka mihevitra isika fa tsy manana sosona fanamoriana tahaka ny ahitantsika ny ankamaroan'ny mpanamboatra sy izany amin'ny fitsipika ankapobeny, ahenao ny fahombiazan'ny rafitra, noho izany dia miloka izy ireo manampy RAM bebe kokoa.
Raha miresaka fitehirizana anatiny isika dia hitantsika ny fomba Google dia mbola mora vidy amin'io lafiny io, toa an'i Apple, ary manolotra antsika ho maodely fototra fitahirizana 64 GB fotsiny. Ny maodely ambony dia manome antsika tahiry 128 GB.
Raha ny fizarana sary, Google dia nanisy fakan-tsary roa voalohany saingy tsy nanaraka ny fironana amin'ny fanampiana zoro malalaka, toy ny ankamaroan'ny terminal avo lenta eny an-tsena, na Android na iPhone an'ny Apple.
Ny vidiny sy ny fisian'ny Google Pixel 4 sy Pixel 4 XL
Ny Pixel 4 dia misy amin'ny loko telo: mainty, fotsy ary volomboasary ary hamely ny tsena amin'ny 24 Oktobra miaraka amin'ny vidiny manaraka, arakaraka ny maodely:
Google Pixel 4 misy tahiry 64 GB ho an'ny 759 euro
Google Pixel 4 misy tahiry 128 GB ho an'ny 859 euro
Google Pixel 4 XL misy tahiry 64 GB amin'ny vidiny 899 euro
Google Pixel 4 XL misy tahiry 64 GB amin'ny vidiny 999 euro
Ny fanoloran-tenan'i Google amin'ny headphone tsy misy tariby dia antsoina hoe Pixel Buds ary manampy izany amin'ny tolotra izay ho hitantsika amin'izao fotoana izao eny an-tsena toy ny Apple AirPods sy Samsung Galaxy Buds. Tsy ho ela dia hataon'izy ireo ihany koa ny Amazon Echo Buds izay natolotry ilay goavambe e-varotra herinandro vitsivitsy lasa izay.
Toy ny ankamaroan'ny mpifaninana, Pixel Buds Manolotra fahaleovan-tena hatramin'ny 5 ora sy 24 ora izy ireo amin'ny alàlan'ny tranga famandrihana. Araka ny efa nampoizina dia mifanaraka amin'ny Google Assistant izy ireo. Tsy manana rafitra fanafoanana ny tabataba izy ireo ary hamely ny tsena amin'ny lohataona ho avy. Ny vidiny: 179 $, ny vidiny mitovy amin'ny ahitantsika an'i Apple AirPods amin'izao fotoana izao.
Tao anatin'ny hetsika naverimberin'ilay mpikaroka fikarohana taorian'ny tsy fahombiazan'ny Pixelbook voalohany, dia nanolotra ny Pixelbook Go ireo lehilahy avy amin'ny Mountain View, laptop iray niverina tantanan'ny ChromeOS, rafitra fandidiana izay tsara ho an'ny solosaina tsy dia matanjaka loatra ho an'ny mpianatra sy ny sekoly, fa tsy ho vahaolana ho an'ny olona mila solosaina finday. Ny olana dia tsy iza fa ny tsy fisian'ny fampiharana.
Na dia marina aza fa io rafitra miasa Google io manana fidirana mivantana amin'ny Play Store, Betsaka amin'ireo rindranasa izay mety ho hitantsika, ohatra, amin'ny resaka fanovana horonantsary no mamela betsaka ny zavatra irina raha ampitahaintsika amin'ireo izay misy ao amin'ny Apple App Store. Antenaina, toy ny Pixelbook voalohany-gén, avela hametraka kopian'ny Windows, satria raha tsy izany, kely na tsy misy fahombiazana eo amin'ny tsena, toy ny taranaka voalohany.
Ny Pixelbook Go dia manome antsika efijery mikasika 13,3 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana Full HD ary tantanan'i a Intel Core M3 / i5 / i7 arakaraka ny fanaingoana ilaintsika. Mikasika ny RAM, manome antsika kinova roa izy: 8 sy 16 GB. Ny fitehirizana dia karazana SSD an'ny 64, 128 ary 256 GB.
Tonga ny bateria, hoy ny mpanamboatra, 12 ora, manana fakan-tsary 2 mpx anoloana izy, tantanan'ny ChromeOS, manana port USB-C roa sy fifandraisana jack 3,5mm izy. Ny maodely mora indrindra, miaraka amina processeur Intel Core M3, RAM 8 GB ary fitehirizana 64 GB, dia mitentina $ 649. Amin'izao fotoana izao, tsy misy daty famotsorana ofisialy ivelan'i Etazonia.
Google Akanim Mini
Nanararaotra an'ity hetsika ity i Google mba hanolorana ny taranaka faharoa mpandahateny maranitra mora vidy atolotra eny an-tsena: Google Nest Mini. Ity taranaka faharoa ity, izay mitazona ny vidin'ny voalohany, dia manolotra antsika ho zava-baovao a puce vaovao izay hiandraikitra ny fitantanana ny fangatahana eo an-toerana, nefa tsy mila mandefa azy ireo any amin'ny rahona handrindra azy ireo, zavatra tena mitovy amin'ny efa natolotry ny Pixel 3 sy Pixel 3 XL antsika.
Io dia mamela anao ho haingana kokoa noho ny taranaka voalohany amin'ny famaliana ireo fanontaniantsika. Ny zava-baovao iray atolotray antsika dia hita any aoriana, lamosina iray izay manisy lavaka hanantonana ny mpandahateny eo amin'ny rindrina. Amin'ity fifindra-monina ity, Google dia maniry ny hanana Google Nest Mini amin'ny toerana rehetra ao an-tranony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Pixel 4, Pixel Buds ary Pixelbook Go no zava-baovao natolotr'i Google
Fanadihadiana momba ny bibidia boaty ivelan'ny angovo